Hafa noho ny Delta Variant an'ny COVID-19 ve ny Delta Plus?
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao isan-karazany » Hafa noho ny Delta Variant an'ny COVID-19 ve ny Delta Plus?
Vaovao Mafana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • fanorenana • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
COVID - variant 19 Delta Plus
Raha manandrana mandray an-tanana ny kinova Delta mampidi-doza an'ny Coronavirus izao tontolo izao, izay mahatonga ny firenena toa an'i Israel hametraka ny fisokafan'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany, ny variana Delta Plus dia tsy mampatahotra ny maro fotsiny, fa misy manampahaizana manokana maniry ny vahoaka miala sasatra.
Ny Delta Plus dia hita tao amin'ny santionany nangonina tany India ny 5 aprily, izay manondro fa na dia tsy marobe aza ny tranga any India amin'izao fotoana izao dia efa misy any amin'ny fanjakana sasany io karazana io ary efa elaela izay.
Ny karazana Delta sy Delta Plus an'ny virus SARS-CoV-2 dia nipoitra ho fandrahonana vaovao amin'ny ady ataon'i India amin'ny areti-mandringana.
Ny faritra nahitana ny Delta Plus dia misy an'i Etazonia, Canada, India, Japan, Nepal, Poland, Portugal, Russia, Switzerland, ary Turkey.
Ny variana Delta Plus dia fiovan'ny endrika Delta tany am-boalohany ary inoana koa fa azo ampitaina kokoa. Tsy dia fantatra loatra hatreto na misy vokany hafa io.
Miaraka amin'ny nosediving aretina vaovao sy ny isan'ireo vaksiny miakatra, Delta, izay voalohany hita tany India, dia ahiahy eran'izao tontolo izao raha toa kosa ny Delta Plus variant mitaky fikarohana bebe kokoa.
Manam-pahaizana maro no nilaza fa raha mandeha amin'ny porofo misy isika ankehitriny, ny Delta Plus dia tsy dia samy hafa be amin'ilay karazana Delta tany am-boalohany. Io no karazana Delta iray ihany miaraka amina mutation iray hafa. Ny hany fahasamihafana eo amin'ny klinika dia ny Delta Plus izay manana fanoherana ny fitsaboana monôlôlôma mitambatra. Tsy fahasamihafana lehibe izany satria ny fitsaboana dia fanadihadiana ary vitsy no afaka mandray an'io fitsaboana io.
Ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana kosa dia namoaka tolo-kevitra fa ny olona vita vaksiny dia mbola manao saron-tava imasom-bahoaka, izay tsy mitovy amin'ireo torolàlana Centers for Disease Control and Prevention (CDC) farany any Etazonia.
Satria ny Delta Plus (B.1.617.2.1 / (AY.1) dia karazana Delta, dia raisina ho toy ny karazana ahiahy ihany koa izany. Nefa ny fananan'ny variana hita tany India (AY.1) dia mbola karohina ankehitriny. Raha ny voalazan'ny consortium génie COVID any India dia tranga AY.1 no nitatitra ny ankamaroan'ny firenena 9 tany Eropa, Azia ary Amerika Avaratra.
Raha ny Delta no notaterina voalohany tany India, ny Delta Plus kosa dia notaterin'ny Public Health England voalohany tao amin'ny buletin'izy 11 Jona. Nolazaina fa ny variant vaovao dia misy amin'ny genome 6 avy any India hatramin'ny Jona 7. Firenena maro no nanidy ny sisintany mankany United Kingdom taorian'ny namoahana ity bulletin ity. Anisan'izany ireo firenena ao amin'ny EU, toa an'i Alemana.
Ireo variana rehetra ireo dia misy fiovan'ny proteinina spike virus. Ny proteinina spike eo ambonin'ny viriosy SARS-CoV-2 dia mamatotra ary mamela ny viriosy hiditra ao amin'ny selan'ny olombelona.
Tamin'ny Jona 16, tranga farafahakeliny 197 no hita tany amin'ny firenena 11 - Britain (36), Canada (1), India (8), Japan (15), Nepal (3), Poland (9), Portugal (22), Russia (1 ), Suisse (18), Torkia (1), ary Etazonia (83).
raha Mivoaka izao ny toerana fizahan-tany miaraka amin'ny tatitry ny fiarahamonina momba ny COVID-19 Delta Variant, Euronews androany dia namintina ny ahiahy momba an'i Eropa momba ny karazana Delta Plus vaovao.